tareenada Archives | Save A tareenka
Home > tareenada
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Iyada oo boqolaal jiidashada taariikhi ah oo views weyn oo u dhaxayn qorraxda xeebaha buuraha cavernous dhunkaday, Europe si dhab ah u dhan leedahay. Waa iyadaa ugu fiican ee safarka wadada a, maadaama ay suurtogal tahay inaad waddadaada uga gudubto waddan ilaa waddan kale…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Inta badan Tirraa by hooska dheer ay deris weyn London, Luton ee Bedfordshire waa jawharad qarsoon in ay si fiican booqo. Aasaasay socda qabashada gobolka by Saxons ee Century Lixaad ee, waxaa nolosha bilowday a 'Tun' (dejinta) kaas oo soo ifbaxay…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Maalin kasta waa hortiisa caadi ah in aad aragto kun oo rakaab ah oo isticmaalaya tareenada ee. Sidaa awgeed, waa layaabna ma leh, in tareenada ee loo yaqaan nolosha dalka. Haddii aan, waxay noqon karaan fowdo aad u weyn waxayna u horseedi kartaa jahwareer iyo daran…